So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa? – 4Jehovah (Yehowa)
“Wɔ afe Apem nniso no awiei no, bɔne nkekae no a etwa to ne nsunsuanso, owuo bɛyɛ nea woayi afi hɔ korakoraa…Nanso pɛyɛ a ɛsɛ sɛ yedu no kyerɛ sɛ saa nnipa no ntumi nyɛ bɔne? Dabi, efisɛ nnipa wɔwɔ pɛyɛ mu nni daa nkwa anidaso gyesɛ woadi nokware wɔ Satan Ɔbonsam ntua a etwa to no”–Asetra wɔ Atirimpɔw, 1977, kratafa 176
Saa Adam ne Hawa “antumi anni nokware”a wɔ bere a wɔyɛ pɛ mpo a ɛnde ɔkwan bɛn so na yebetumi?
Mfomso biako koraa betumi ama obi gyinabea pa a ɔwɔ, wɔ atemmu mu no asɛe nnwuma pa a woayɛ nyinaa mpo asɛe daa nkwa anidaso”–Ɔwɛn Aban August 1, 1992, kr. 17
Saa Yesu wuui maa bɔne nyinaa a, ɛnde dɛn bɔne na ebetumi ama woahweree wo daa nkwaa anidaso?
“Saa yɛanyɛ ɔnokwaredifo, ɔno de ɔyɛ ɔnokwafo, efisɛ otumi mpo ne ho”
Tagged Gyidi ne Nnwuma, Nkwagye
← Enti Yesu wui wɔ mmeamudua anaasɛ asendua so?
Yehowa Adansefo – abakᴐsԑm ne gyidi →